दाइजोसमेत पति महाराजका नाममा हुँदा मुमा बडामहारानी रत्नको बिचल्ली ! « Nepali Digital Newspaper
दाइजोसमेत पति महाराजका नाममा हुँदा मुमा बडामहारानी रत्नको बिचल्ली !
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०३:०४
तत्कालिन श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवसँग विवाह गरी बडामहारानी बन्नुभएकी रत्न राज्यलक्ष्मीदेवी शाहका लागि पति राजा महेन्द्रले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बंगला निर्माण गर्नुभयो । उहाँकै लागि चितवनमा दियालो बंगला र उहाँको नाममा पोखरामा रत्न मन्दिर बने । बडामहारानीका नाममा बंगलाहरूको निर्माण भए पनि दस्ताबेजमा उहाँको नाम थिएन । दरबारका महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन थिएन र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि थिएन । दरबारका महारानी, युवराज्ञी र राजकुमारीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व नहुने हुँदा उहाँहरूको नागरिकतासमेत हुँदैनथ्यो । आफूले ब्यवहार गर्नु नपर्ने भएपछि नागरिकताको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।
दरबारका महिला हुन् या झुपडीका, सबै महिलाले समान रूपमा अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । मुमा बडामहारानी रत्नदेखि अधिराजकुमारी प्रेरणासम्मलाई हेर्दा राजाको सम्पत्ति अधिग्रहणका नाममा दरबारका महिलामाथि अन्याय भएको पाइएको छ । दरबारका महिलाहरू घरबाहिर निस्कन र आफ्नै कमाइ गर्न स्वतन्त्र थिएनन्, बाबुहरूले दिएको दाइजो र पतिको सम्पत्ति नै उनीहरूको बाँच्ने आधार हो भन्ने कुराको हेक्का नराखी उनीहरूको बिचल्ली बनाइएको छ । मुमा बडामहारानी रत्न जीवित भएका कारण सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा हकले पाउने पतिको अंश कायम गरिदिनु पथ्र्यो । आफ्ना पतिको अंश र माइतीले दिएको दाइजोसमेत नपाएको अवस्थामा उहाँको सम्पूर्ण खर्च राज्यले ब्यहोर्नुपथ्र्यो, पर्छ । तर यहाँ नागरिकका समस्याप्रति राज्य संवेदनशील नभइदिनाले अनेक प्रकारका असामान्य समस्याको उत्पत्ति हुने गरेको छ ।
एमाले पदाधिकारीमा को-को प्रस्तावित ?
भीम रावलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता नेकपा (एमाले)को सौराहामा जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत गएरातिको बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित